निषेधाज्ञामै सुरु भयो नेपालमा क्लबहाउस, को को छन् नेपालि सेलिब्रेटीहरु ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
ईटहरी/ नेपालमा सामाजिक संजालको प्रभाव निकै नै छ । यसको लोकप्रियतासंगै सकारात्मक त छदै छ नकारात्मक असरहरु पनि दैनिक जसो हुने गरेको छ । छिटो सुचना पाउन, आफ्नो गतिविधि साझेदार गर्न, टाढा रहेका आफन्त तथा साथीभाइ संग भिडियो र अडियो मार्फत कुरा गर्न पाउने हुदा सामाजिक संजाल नजिकको साथी बनेको छ । फेसबुक, टिकटक, ईन्स्टाग्राम, युट्युब, ट्विटर लगायत सामाजिक संजाल नेपालमा लोकप्रिय छन् । यसैबीचमा अर्को सामाजिक संजालले नेपालमा आफ्नो पकड बनाउन थालेको छ । अडियो प्लेटफर्मको रुपमा लोकप्रियता कमाउदै गएको ‘क्लब हाउस’ले नेपालिको मन जित्न सुरु गरेको छ । यसो भन्दै गर्दा नेपाली सेलिब्रेटिहरु चाहिँ को को छन् क्लब आउसमा ? भन्ने जिज्ञाशा लाग्न सक्छ । आज हामी त्यही बिषयमा कुराकानी गर्दैछौ । अन्य सामाजिक संजालमा झै क्लब हाउसमा सिधै आफ्नो एकाउन्ट बनाउन सकिँदैन ।
मिस नेपाल २००२ कि बिजेता, टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता तथा अभिनेत्री माल्भिका सुब्बा, मोडल तथा २०१७ कि मिस नेपाल ईन्टरनेसनल नीति शाह, अभिनेत्री वर्षा राउत, अभिनेत्री केकि अधिकारी, अभिनेत्री रिचा शर्मा, अभिनेत्री प्रीयंका कार्की, अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, गायक तथा गीतकार कालीप्रसाद बास्कोटा, अभिनेता, फिल्म निर्माता तथा नेपाल आईडल होस्ट असिम शाह, अभिनेत्री सुरक्षा पन्त, कलाकार रबिन्द्र सिह बानिया, अभिनेत्री तथा टिभी होस्ट रिमा विश्वकर्मा, अभिनेत्री बेनिशा हमाल, मोडल रियाशा दाहाल, अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवा, अभिनेत्री तथा मोडल सन्ध्या केसि, अभिनेता सलोन बस्नेत र मोडल निराजन बस्नेत लगायत कलाकारहरु क्लबहाउसमा छन् । हामीले उनीहरुलाई कतिले फलो गरेका छन् र उनीहरुले क्लातिलाई फलो गरेका छन् ? लगायतका जिज्ञाशालाई समेट्दै यो भिडियो बनाएका छौ । हेर्नुस भिडियो :
निशा घिमिरेलाई हस्पिटल भित्रै बिष खुवाउने,भाइ बनेर सेक्युरिटी तोडेर भित्र...
कस्तीबाट कस्ती भईन मेरी बास्सैकी चम्सुरी, हेर्नुस यस्तो डरलाग्दो अवस्था...
काठमाडौँमा यो जोडीको यस्तो धन्दा, म्याद सकिएको एटीएम कार्डबाट यसरि...
नेपालमै टिकटकबाट महिनाको २ लाख भन्दा बढी कमाउने युवा, तपाइले...
बिचरा, चामलको एक दाना नभएपछि रातदिन भोकभोकै सुतेको अवस्थामा भेटिए...